Nahavita ny valin’adiny ny ekipan’ny St Michel Amparibe raha nandresy ny Cosfa 1 Analamanga 32-29 ka voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara 2019 sokajy lehilahy. Nahatazona ny anaram-boninahitra azony tamin’ny taon-dasa kosa ny vehivavin’ny Thbc Analamanga rehefa nandresy an’ny Hbci Ihorombe tamin’ny 30-18. Hbca Analamanga no nitana ny laharana faha-3 teo amin’ny sokajy vehivavy ary ny Cosfa 2 teo amin’ny sokajy vehivavy. Mpilalao mendriky ny fifaninanana i Nicole (Hbci) vehivavy ary i Jhon Price (Assm) lehilahy. Mpiandry harato mendrika indrindra i Lolou (Assm) lehilahy sy Nosy (Thbc). Notolorana ny amboaran’ny “Fair-play” kosa ny ekipa lehilahin’ny SMI Itaosy. Nanokanana 1 mn fahanginana kosa ireo nodimandry nahavita be teo amin’ny sehatry ny hand-ball toa an’i Mohamed Saleh, Rasendra Jean, Ralaiavy Armand ary Rajaonarivelo Monique.